मेरो जीवन खुला किताबजस्तै... - Naya Patrika
मेरो जीवन खुला किताबजस्तै…
काठमाडाैँ | पुष ०१, २०७४
मेरो जीवन खुला किताबजस्तै… – म सार्वजनिक मान्छे । मेरो जीवन खुला किताबजस्तै भइसक्यो । मेरो थाहा नपाएको पक्ष त्यति धेरै छैन जस्तो लाग्छ । म पूर्वपत्रकार र अहिले राजनीतिमा नवआगन्तुक हुनुको अलावा कविता लेख्छु । मौका पर्दा अभिनय पनि गर्छु । परोपकारी गतिविधिमा अद्यावधिक रूपमा संलग्न छु । मलाई संगीत सुन्न असाध्यै मनपर्छ ।
म एकदमै संवेदनशील छु । एकदमै दृढ अनि लगनशील छु । परिश्रमी छु । एकदमै देशभक्त पनि । देशलाई माया गर्ने भएकैले जागिर छोडेर राजनीतिमा आएको हुँ । मैले बेलायतको जागिर छोडेर नेपाल फर्किएको त सबैलाई थाहै छ ।
घमन्डी त पटक्कै छैन
म घमन्डी त पटक्कै छैन । यद्यपि, मेरा अन्तर्वार्ता सुनेर कतिपयले घमन्डी हुँला भनेर अनुमान लगाउँथे । तर, मलाई भेटेपछि तपाईँ त्यस्तो होइन रहेछ भनेर भन्ने गरेका छन् । घमन्डले आफैँलाई खान्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
मलाई सरल मान्छे भन्दा एकदमै हुन्छ जस्तो लाग्छ । आफैँले आफैँलाई सरल भन्ने भनेर मलाई घमन्डी पो भन्ला कि कसैले फेरि !
देश रूपान्तरणका लागि राजनीतिमा
हाम्रै जीवनकालमा यो देशलाई रूपान्तरण गर्नैपर्यो । विदेश पढ्न गएका हाम्रा छोराछोरीलाई स्वतस्फुर्त रूपमा स्वदेश फर्काउनैपर्यो । हाम्रा युवा दिनको १५ सयदेखि १७ सयसम्म विदेश गइरहेका छन् । उनीहरूलाई त्यो स्थितिबाट रोक्नैपर्यो भनेर म राजनीतिमा लागेको हुँ ।
उत्साही छु, सन्तुष्ट छैन
मेरो लक्ष्य देशको नेत्तृत्व गर्दै रूपान्तरण गर्नु हो । त्यसैले, अत्यन्तै उत्साही छौँ । तर, सन्तुष्ट भने भइसकेका छैनौँ । यो देश रूपान्तरण भएको हाम्रै आँखाले देखेपछि मात्र सन्तुष्ट हुने हो ।
नेपाल धेरै पछि छ
लामो समय बेलायत बसेँ । त्यहाँ र नेपालको तुलना गर्ने कुरै भएन । म पाकिस्तान पनि बसेँ । पाकिस्तान असाध्यै परम्परागत समाज भएको देश हो । तैपनि, त्यहाँको विकासको गति हाम्रोभन्दा धेरै अगाडि छ । त्यहाँको शिक्षाको स्तर हाम्रोभन्दा राम्रो छ । प्रशासन हाम्रोभन्दा दरिलो छ । र, त्यो देशले विविध जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र राजनीतिक संकट व्यहोर्दा पनि यहाँको भन्दा राम्रो आर्थिक प्रगति गरिराखेको छ ।
संगीत असाध्यै मन पर्छ
म सार्वजनिक मान्छे । मेरो जीवन खुला किताबजस्तै भइसक्यो । मेरो थाहा नपाएको पक्ष त्यति धेरै छैन जस्तो लाग्छ । म पूर्वपत्रकार र अहिले राजनीतिमा नवआगन्तुक हुनुको अलावा कविता लेख्छु । मौका पर्दा अभिनय पनि गर्छु । परोपकारी गतिविधिमा अद्यावधिक रूपमा संलग्न छु । मलाई संगीत सुन्न असाध्यै मनपर्छ ।
सहर मेरा लागि उकुसमुकुसपूर्ण भूगोल हो
मलाई स्वच्छ प्रकृति असाध्यै मनपर्छ । सहर मेरा लागि उकुसमुकुसपूर्ण भूगोल हो । तैपनि बस्न बाध्य छु । मभित्र यति धेरै सोचाइ आउँछन् कि ती सोचाइलाई व्यवस्थापन गर्न वेलाबखत गाह्रो हुन्छ । र, म परिवारसँग असाध्यै रमाउने मान्छे हुँ ।
परोपकारी कुरामा खर्च गर्छु
म व्यक्तिगत रूपले हेर्दा पटक्कै खर्चालु छैन । तर, परोपकारी गतिविधिमा खर्च गरिरहेको हुन्छु । अन्यथा, त्यस्तो खर्चालु होइन ।
म राम्रै खेलाडी थिएँ
म स्कुल–कलेज पढ्दा खेलाडी थिएँ । भलिबल, फुटबल, ब्याडमिन्टन र चेसको राम्रै खेलाडीमा गनिन्थेँ । अहिले त सबै बन्द भयो । चेसको कुरा गर्दा स्कुल, कलेज र टोलमा म प्रथम हुन्थेँ । ब्याडमिन्टनमा भने दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कम्मर दुखेका कारण खेल्न पाइनँ । सायद भाग लिन पाएको भए प्रथम नै हुन्थेँ होला ! किनकि, मैले सधैँ हराइरहेको व्यक्ति नै फस्र्ट हुनुभयो ।
मानवीयता नै अध्यात्म हो
म मानवीयताको हिसाबले हेर्दा आध्यात्मिक मान्छे हुँ । तर, दिनहुँ मन्दिर गएर पूजा गर्ने खालको आध्यात्मिकचाहिँ होइन ।
प्रस्तुति : दीपेन्द्र सापकोटा